Konke malunga nokuPrinta nokudlala, uPrinta kwaye udlale- Ikkaro
yokuqalisa >> Imidlalo >> Phrinta kwaye udlale
Phrinta kwaye udlale
Icandelo elibekelwe ukuPrinta nokudlala. Zombini zazise imidlalo kunye neendlela zokwakha umdlalo ze-DIY.
Phrinta kwaye udlale, Phrinta kwaye udlale. Luhlobo lomdlalo "olula" onokuwudlala ngomshicileli kuphela, kuba ziyilelwe ukuba ziprintwe kwaye zidlalwe ephepheni.
Ukufikelela ngokukhawuleza okukhulu, kodwa oko kunokuba nemithetho enzima kunye noomatshini. Akufanele udideke ngokulula kokuveliswa kwayo.
Imodareyitha eneziko elinokuthi lingaziwa, kodwa ukuba ulinika ithuba, ngokuqinisekileyo liya kukunika amaxesha amahle kunye namaxesha amaninzi okonwaba.
Phrinta & Dlala, umdlalo webhodi kunye nenkcubeko ye-DIY
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ku-twitter ndiye ndavakalisa ukuba bandifumene ubugcisa bokuPrinta nokudlala, kwaye ukusukela ngoko bendisenza uphando ukubona eli lizwe likunikayo nokuba kunomdla ukulongeza kwi Icandelo leMidlalo
UkuPrinta nokudlala ndikudlulisile ekudalweni kwemidlalo yebhodi ngokubanzi kwaye ndiye ndathandana, khange ndiyicinge loo nto kwimidlalo yebhodi kukho indalo iphela enikezelwe kwi-DIY.
Eyona nto indothusileyo yeyokuba inani elikhulu lemibuzo kunye namathandabuzo abantu abanawo xa besenza iziqwenga ndiyakwazi ukusombulula kunye / okanye ukucebisa. Yenza iziqwenga ngezinto ezingabizi kakhulu, sebenza ngezinto ezahlukeneyo, njl. Kudala ndifunda kwaye ndibhala ngayo yonke le nto, kufuneka uyisebenzise kwi Ukudalwa komdlalo webhodi.